Zimbabwe Expels Libyan Ambassador » Africa Global Village
August 30, 2011 Global Author ambassador expelled, AU, Libya, Zimbabwe
Zimbabwe has given Libya’s ambassador to Harare 72 hours to leave the country.
Zimbabwe’s Foreign Minister Simbarashe Mumbengegwi said Tuesday the decision was made after the Libyan embassy declared its allegiance to Libya’s Transitional National Council.
Mumbengegwi told reporters Zimbabwe does not recognize the TNC as Libya’s legitimate government.
Zimbabwe’s President Robert Mugabe and Libya’s Colonel Gadhafi were close allies for many years, though they had a falling out in 2004 when Zimbabwe failed to pay for two-thirds of $360-million in fuel supplied by Libya’s state oil company.
Still, news outlets controlled by Mr. Mugabe’s ZANU-PF party, including Zimbabwe Broadcasting Corporation, have strongly criticized Western support for the rebels.
Mr. Mugabe recently said that while he did not support Colonel Gadhafi’s governance or his attacks on demonstrators in February, he believed the West is only interested in Libya for its oil.
Various news reports have mentioned Zimbabwe as a possible refuge for Colonel Gadhafi. But the MDC party, ZANU-PF’s partner in Zimbabwe’s coalition government, has said it would block any attempt to extend asylum to the Libyan leader.